Akụkọ Egwuregwu Ndị Egwuregwu Eshia nke Asia
Home ASIAN FOOTBALL STORIES
Ndị ọkachamara na Egwuregwu Eshia Asia ejirila Akụkọ nwata. LifeBogger na-agwa gị akụkọ ndị a, nke nwere ọtụtụ oge agaghị echefu echefu ma na-atọ ma obi ụtọ.
Kedu ihe kpatara akụkọ nwata banyere ndị egwuregwu egwuregwu Eshia?
N'oge na-adịbeghị anya, na gburugburu 2016, anyị hụrụ ọdịiche ihe ọmụma dị ukwuu dị na weebụ. Ọ bụ otu nke metụtara enweghị afọ ojuju zuru ezu gbasara ndị egwuregwu egwuregwu Eshia.
Iji meghee oghere a, LifeBogger kpebiri ịkpụzi Eshia Echiche, na-eburu Eke akụkọ Akụkọ hoodmụaka na Eziokwu Akụkọ ndụ nke ndị egwuregwu Afrịka.
Banyere Egwuregwu Eshia Eshia Anyị
Akụkọ LifeBogger na-enwe ezi uche maka akụkọ ya niile. Ihe ndị a ga - eme ka ị nweta nghọta kacha mma banyere ọdịnaya Eshia anyị.
Nke mbu, anyi ewetara gi akụkọ banyere ndi egwuregwu n’agba ndi Esia, site na mgbe amuru ha, na ndu ha.
Anyị ewetakwara gị ozi gbasara etu ezinụlọ si bido na mmalite nke ndị egwuregwu egwuregwu Asia. Ọzọkwa, ndị mụrụ ha (papa na mama m).
Nke ato, anyi na agwa gi ihe omume mbu nke ndu ha na ahuhu ha (ma obu ihe ojoo) nke mere ka ha mezue ọkpụkpọ oku ha.
Akụkọ ahụ gara n'ihu na ihe ndị mere na ntorobịa ọrụ ha.
Ihe na-esote ya bu okporo uzo anyi banyere akuko. N'ebe a, anyị na-akọwa ihe ndị egwuregwu bọọlụ Eshia iji wee nwee ihe ịga nke ọma.
Nrute anyị banyere akụkọ ama ama kọwakwuru akụkọ banyere ha na-aga nke ọma na ọnọdụ a ma ama ugbu a.
Anyị na-aga n’ihu ime ka gị na Akụkọ Lovehụnanya ha (enyi nwanyị na ndị nwunye) mee ka gị na ha dị ọhụrụ.
Nke abia bu eziokwu banyere ndu ndi nke ndi egwuregwu egwuregwu nke Asia.
Ndị otu anyị na-eme ka ị mata ndị ezin’ụlọ ha, yana mmekọrịta gị na ndị ezinụlọ na ndị ikwu gị.
Ihe na - esote bu Eziokwu ndu ya, Networth na inweta.
N’ikpeazụ, anyị ga-ewetara gị akụkọ eziokwu ị na-amabeghị na ndị egwuregwu Asia.
Na nchikota, anyi kwenyere na udi a ga - enyere gi aka idozi ohere n’inwe ozi zuru ezu banyere ndi egwuregwu Asia Akụkọ nwata na Eziokwu Akụkọ ndụ. Obi dị anyị ụtọ, ndị na-agba bọl bọọlụ nwere ike lelee egwuregwu ahụ ma n'otu oge ahụ, gụọ akụkọ dị ịtụnanya gbasara ndị egwuregwu ha na-akwado.
LifeBogger na-agba mbọ maka izi ezi na izi ezi na usoro ọ na-agbanwe agbanwe nke na-ebuga akwụkwọ football. Biko Kpọtụrụ Anyị ọ bụrụ n’ịhụ ihe ọ bụla adịghị mma maka nke ọ bụla n’edemede anyị.
Ugbu a, abịa Akụkọ Egwuregwu Eshia Anyị.
Editọ LifeBogger - Bọchị gbanwee: Mee 13, 2020
Editọ LifeBogger - Bọchị gbanwee: Jenụwarị 24, 2019 0
Aleksandr Golovin Childhood Story Plus Ihe na-emeghị ka ọ bụrụ eziokwu
Editọ LifeBogger - Bọchị edoziri: July 22, 2018 0
Editọ LifeBogger - Bọchị gbanwee: Eprel 12, 2020 0
Denis Cheryshev Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ eziokwu
Editọ LifeBogger - Bọchị agbanweela: Septemba 23, 2018 0
Fyodor Smolov Child Story Plus Ihe na-adịghị agbanwe akụkọ ihe mere eme
Editọ LifeBogger - Bọchị edoziri: July 23, 2018 0
Aleksandr Kokorin Childhood Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu
Editọ LifeBogger - Bọchị edoziri: July 2, 2020 0
Editọ LifeBogger - Bọchị agbanwee: Disemba 1, 2019 0
Shinji Kagawa Childhood Story Plus Na-emeghe Eziokwu Ihe Echiche
Editọ LifeBogger - Bọchị agbanwee: Disemba 18, 2017 0
Roman Pavlyuchenko Nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma ihe omuma
Editọ LifeBogger - Bọchị agbanwee: Disemba 18, 2017 2